उत्तर दिनुहोस् र आकर्षक पुरस्कार जित्नुहोस्
४ जना मुर्खहरु आफुहरु धेरै नै बेरोजगार भइयो भनी केही गरौं भन्ने बिचार गरेछन् ।
पहिलो मुर्खले भनेछ "ए मुर्खहरु तिमीहरु देशलाई भारी हुनेगरी के बाँचिराख्या काम गरेर खाने बिचार छैन कि कसो ?"
दोस्रो मुर्खले थप्यो "हो यार हामीले पनि केही गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो ।"
तेस्रोले भन्यो "त्यसो भए के काम गर्ने त ?"
चौथोले उत्तर दियो "लौ त्यसो भए कोरियाबाट एउटा हुन्डाइ कम्पनीको एउटा ट्याक्सी झिकाएर नेपालमा चलाऔं अनि धेरै पैसा कमाऔं न ।"
सबैले उसको कुरा मनासिव ठान्यो अनि झिकाइयो कोरियाबाट एकदमै महङ्गो गाडी जसमा सबै किसिमका फेसिलिटीहरु थियो । नेपालमा दर्ता गर्ने नम्बर प्लेटहरु राख्ने जसता सबै प्रकृयाहरु पूरा गर्न ती मुर्खहरुले बिर्सेनछन् । अब ट्याक्सी चलाएर पैसा कमाउने काम मात्र बाँकी रह्यो त्यसैले एउटा चोकमा गाडी रोकेछन् र ट्याक्सी चढ्न आउने ग्राहकहरु पर्ख‌ंदै बसेछन् ।
मान्छेहरु ट्याक्सी चढ्छु भनेर अगाडी आउंछन् तर फेरि फरक्क फर्केर जान्छन् । कोही पनि चढ्न मानेनन् । ट्याक्सी यता ल्याउ भनेर पर बाटै हात हल्लाएर बोलाउंथ्यो तर अगाडी लग्दा चढ्नै मान्दैनन् । कोही पनि चढेनन् किन होला ?
उत्तर दिनको लागि purunepal@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस् ।
यसको सही उत्तर दिनेलाई आकर्षक पुरस्कार दिइनेछ ।